Air Canada mankalaza ny fitokanana ny sidina Montreal-Algiers
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Canada mankalaza ny fitokanana ny sidina Montreal-Algiers
Amin'ny fiaingan'ny sidina Air Canada Rouge AC1920 mankany Algiers rahampitso hariva, manamarika ny fanombohana serivisy tsy an-kiato ho an'ny renivohitr'i Algeria ny Air Canada, toerana faharoa any Afrika Avaratra avy ao amin'ny ivon-toerany Montreal.
"Ny Air Canada dia faly mampiditra serivisy tsy an-kijanona avy any Montreal mankany Algiers ho any amin'ny toerana manintona vaovao izay manitatra ny vitanay manerantany avy any Montreal, manamafy an'i Montreal-Trudeau ho toy ny foibe stratejika ho an'ny atsinanan'i Canada sy Etazonia Avaratra-Atsinanana," hoy i Benjamin Smith , Filoham-pirenena, Fiaramanidina mpandeha ao amin'ny Air Canada. “Miorina amin'ny sidina mahomby Montreal-Casablanca an'ny Air Canada izay miasa mandritra ny taona mandavantaona, ny serivisy mankany Algiers no hany sidina tsy miato ataon'ny mpitatitra kanadiana eo anelanelan'ny Montreal sy ny tanàna afrikanina avaratra, mametraka ny Air Canada ho mpilalao manan-danja eo amin'ny tsena lehibe sy mitombo eo anelanelan'i Canada sy Algeria. Izy io no ho làlantsika faharoa any Afrika, izay mahatonga ny Air Canada ho iray amin'ireo mpitatitra manerantany kely fotsiny manidina amin'ireo kaontinanta enina misy mponina. ”
“Amin'ity sidina fizaran-taona vaovao ity dia azo atao izao ny mandeha mankany Algiers ary mandroso ary manome vahana bebe kokoa ho an'ireo mpandeha ary manampy amin'ny fampiroboroboana ny Quebec any ivelany. Resy lahatra aho fa ity sidina miverina ity dia hahatonga ny tanànan'i Montreal tsara tarehy ho manintona kokoa ny mpizahatany. Ity sidina ity dia vaovao tsara ihany koa ho an'ny vondron'orinasa, satria hiteraka fifandraisana ara-barotra eo amin'i Quebec sy Algeria io, "hoy i Lise Thériault, praiminisitra lefitra, tompon'andraikitra amin'ny satan'ny vehivavy, minisitra tompon'andraikitra amin'ny orinasa madinidinika, fampivoarana ny lalàna ary ny faritra. Fampandrosoana ara-toekarena, ary minisitra tompon'andraikitra amin'ny faritra Lanaudière.
"Ny fampidirana Algiers ho an'ny tambajotra Montreal Montreal dia mampiseho indray ny fomba nahatongavan'i Montreal-Trudeau ho foibe stratejika ary manatsara ny serivisy atolotra avy any Montreal," hoy i Philippe Rainville, filoha sady Lehiben'ny Executive Aéroports de Montréal. "Ny fitomboana haingana amin'ny serivisy fiaramanidina dia manamafy ny toerana misy anay ho foibem-pifamoivoizana iraisampirenena, indrindra fa ny tsena miavaka atsy Afrika Avaratra sy ny Moyen Orient."
Ity zotra fizaran-taona vaovao ity dia hoentin'ny Air Canada Rouge miaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 282-767ER misy seza 300, ahitana safidy safidy safidy fampiononana ho an'ny mpanjifa telo: Toekarena; Fipetrahana ankafidy manolotra efitrano fanampiny; ary Premium Rouge miaraka amin'ny habaka manokana sy serivisy mihamitombo.
Ny sidina dia omena fotoana hanatsarana ny fifandraisana amin'ny sy avy any amin'ny foiben'ny Montreal Montreal. Ny sidina rehetra dia manome ny fanangonana sy fanavotana ny Aeroplan ary, ho an'ireo mpanjifa mendrika, ny fidirana an-tsokosoko, ny fidirana Maple Leaf Lounge, ny laharam-pahamehana ary ny tombontsoa hafa.
Miala ny sidina dia tonga ny andro amin'ny herinandro
Alger 07:40 +1 Alatsinainy, talata, alakamisy ary
AC1920 Montreal 18:50 andro Sabotsy
AC1921 Alger 10:10 Montreal 13:40 Talata, Alarobia, Zoma ary Alahady
Ny fivorian'ny Mexico sy ny indostrian'ny hetsika dia mitana ny laharana faha-5 ao Amerika
Miarahaba ny seranam-piaramanidina Hong Kong Airlines ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver